ဂျယ်ရမီ? အဆိုပါ Indie ရော့ခ်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ရည်မှန်းချက်သည့်တစ်ဦးတီးဝိုင်း - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
မဂ္ဂဇင်း TV စာရေးဆရာများ ခေါင်းစဉ်များ Tags:
အဆိုပါ Indie ရော့ခ်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ရည်မှန်းချက်သည့်တစ်ဦးတီးဝိုင်း
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သူတို့၏ "ကြီးမားတဲ့အခိုက်" ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ယခုအထိလူသိများထံမှကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုမောင်းထုတ်ရန်ဆက်လက်သူတွေကိုတစ်တီးဝိုင်း။
အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း, အ onrush, သူတို့ရဲ့သစ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, တားဆီးဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုနှင့်ပိုပြီးကူညီပေးသည်နှင့်ထို့ထက် ပို. အဘယ်သို့သောအကြောင်း ... ကျနော်တို့ဂျယ်ရမီမိတ်ဆက်နေကြသနည်း Ersin Mustafov နဲ့ရိုးရိုးသားသားစကားပြောဆိုမှုအတွက် - frontman နှင့်ရစ်သမ်ဂစ်တာနဲ့ Tasho Kolev - ဦးဆောင်ဂစ်တာ။
အသစ်ကဂျယ်ရမီရယူမလား? အယ်လ်ဘမ်အွန်လိုင်းကနေ iTunes က, Spotify, Google Play စ, အမေဇုံဂီတ, Deezer
Boian Bochev ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag:
အဘယျသို့နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များသင်သည်သင်၏ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတည်း "မဟာ Escape ကိုရဖို့နှစ်ပတ်အချိန်" နှင့် ပတ်သက်. မီဒီယာ, ပရိသတ်တွေ, သူငယ်ချင်းကနေရပါသလဲ? သီချင်း၏သတင်းစကားကိုသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိပြီလော
ကျနော်တို့မီဒီယာတုံ့ပြန်မှုများပိုမိုနက်ရှိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးစေခြင်းငှါအရာစဉ်အတွင်း, ရှည်လျားအလုံအလောက်တစ်ချိုးခဲ့ပေမယ့်ဘာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိမလာကြကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်အနည်းငယ်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။ ကောင်းသောစကားများ, ပင်နှိုငျးမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပတ်လည်ကလူကနေကျွန်တော်တို့ကိုလာမယ့်အပေါ်စောင့်ရှောက်လော့။ ငါတို့သည်လည်းအချို့ဝေဖန်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအရဝမျးသာဖြစ်ကြသည်။ "နှစ်ပတ်အတွင်း" တကယ်ငါတို့သည်သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မျှော်လင့်အတိအကျရှိရာနားထောင်ကြာပါသည်။
© Terminal နှင့် 1
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပို. ပို. တင်းမာနေအသက်တာ၌အဘယျအသင်အမှန်တကယ်အနားယူစေသည်? စာအုပ်များ, ချက်ပြုတ်, ရုပ်ရှင်ရုံ, အားကစား, တီဗီ, ဂီတ, သငျသညျ ... သနည်း
ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုရှိပါတယ်။ Music ကိုလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့မရှိသလောက်ပရိတ်သတ်တွေကဲ့သို့၎င်း, မဟုတ်ဂီတသမားအဖြစ်ကိုနားထောင်ကြောင်းမှန်ပေမယ့်လည်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ကျနော်တို့ play ရှိရာပွဲတော်များ, မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးခညျြအနှော '' တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲများစွာကိုနားထောင်ကြလော့။ ဒါဟာအဲဒီမှာပွဲတော်များဖြစ်ကြပြီးသူတို့ ပို. ပို. အားကောင်းလိုင်း-ups အတူ ပို. ပို. လက်လှမ်းဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအဘို့အအချိန်ရှိသည်အခါတိုင်းချက်ပြုတ်အတွက်အပြင်, ငါ (Ersin) စမ်းသပ်ချက်။ သင့်လျော်သောအစာအာဟာရကိုအလုံးစုံတို့အဘို့အရေးကြီးပါသည်။ ငါတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ (tash) စောင့်ကြည့်ဖို့ပျောက်ဆုံးမဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. သတိထားမိပါတယ်။ ကျွန်မသင်တန်း၏, Grisho ၏, ဒီအားကစားတစ်ခုကြီးမားသောပန်ကာရယ်နှင့်။ ကျနော်တို့မကြာခင်ကျနော်တို့ကဘူဂေးရီးယား Ace နဲ့ Gig ရှိလိမ့်မည်ဟုကိုယျ့ကိုယျကိုပြောနှင့်ပြီ။ hehe, ကအချိန်ပါပဲ။ Emo မကြာခဏအိုင်နားမှသွားရောက်ကာနဲ့လှပတဲ့အမြင်များနှင့်အတူရှိကြမယ်!, ပင်လယ်ဝေဟင်ခံစား။ ရော့စ်ဟာအလုပ်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကသူမှာအားလုံးအိပ်တော်မမူကြောင်းသူ့ကိုအကြောင်းကိုဟာသဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူ့ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်အိပ်ပျော်ခြင်းမှဖြစ်လိမ့်မည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာသင်တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာငါဆိုလိုအတူတကွနေထိုင်နေကြပါပြီ။ သင်ပိုမိုလူကြိုက်များရရှိခဲ့ချိန် မှစ. သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲရှိပါသလား? သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင့်ရဲ့တိုက်ခန်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ရယ်စရာပုံပြင်ကိုပြောပြနိုင်မလား?
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သဘောထားအမြင်များကိုမျှဝေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်လူတွေရှိသည်ဖို့အများကြီးချစ်ပြီးကျွန်တော်သူတို့နှင့်အတူတူညီလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်ဂီတနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လိုအပ်သောအခြေခံကိုဖန်တီးရန်လုပ်ဖို့အကြောင်းပြောဆို။ အပြောင်းအလဲကိုကျနော်တို့တစ်ခုခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲအတူတကွဖြုန်းဖို့စီမံခန့်ခွဲကာလ၌ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုလွဲချော်ခဲ့သူတဦးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြောင့်ခရီးစဉ်သို့မဟုတ်အသံသွင်းတဲ့အနေဖြင့်ထိုသို့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြောင်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့အမျက်တော် ထွက်. ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ပြန်နောက်ကျအလွန် "shaggy" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုတက်ရောက်ပြီးလျှင်ကြောင့်ကြည့်သူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တစ်ပါတီခဲ့ပြီးတော့နောက်တဖန်အိပ်ပျော်ထံသို့သွားလေ၏။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ပွဲဦးထွက် LP သို့အယ်လ်ဘမ်မျှော်လင့်နေကြသည်။ အဲဒီအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုငါ့ကိုပြောပြပါ!
အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ကိုအလွန်အမင်းမျှော်လင့်ရသည်, ငါတို့က LP သို့တစ်ခုဖြစ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ အဆိုပါ link ကိုနှင့်တီးဝိုင်းများ၏အရေးအပါဆုံးအဖွဲ့ဝင်သစ် Yanko Genov ဖြစ်ပါတယ်။ သူရောနှောအပေါင်းတို့နှင့်အတူအယ်လ်ဘမ်သီချင်းဆိုအင်ဂျင်နီယာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အသံသူ၏ရူပါရုံငါတို့နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုလည်းသူကဖြည့်။ Dublin, အိုင်ယာလန် - မြေတပြင်လုံးအယ်လ်ဘမ် WAV Master ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ ဒါကနောက်ဆုံးခြေလှမ်းကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဖြစ်ကောင်းအယ်လ်ဘမ်နှင့်ပြီးသားဖြန့်ချိသည့်တစ်ဦးချင်းဆိုရင် single စကားကိုနားထောငျသောသူမည်သည်, ကခံစားမိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့နေဆဲအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုအကူအညီကိုရှာရန်လိုအပ်ပါတယ်အယ်လ်ဘမ်အတွက်ပုဒ်၏အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအဖုံးအနုပညာလက်ရာများကိုရှေးခယျြကြပြီမဟုတ် - အပြင်ကဒီမှာကျနော်တို့ shared ကြပြီမဟုတ်တစ်ခုခုပါပဲ။ ဒီရှုထောင့်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နောက်ဆုံးအခိုက်သည်အထိရှာဖွေရေးအတွက်အများအားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ မဟုတ်ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးတစ်ခုခုဖြစ်ချင်လို့ပဲ။ ကျနော်တို့ကအမြင်အာရုံသတင်းစကား၏အရေးပါမှုကိုသိသောကြောင့်ယင်းအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ပရိတ်သတ်များမှသိရှိစေရန်။
သံသယ။ တစ်ဖွဲ့လုံးက "no" ဆိုတဲ့ မှစ. ။ "မျှော်လင့်ခြင်း" တွင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်း။ သငျသညျမိမိတို့စိတ်ဓါတ်များအတွက်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအများကြီးအယ်လ်ဘမ်ဝက်ဝံအတွက်သမျှသောသီခငျြးမြားကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်တဦးတည်း, ထိုအချည်းနှီးသောပစ္စုပ္ပန်တစ်ငြင်းပယ်ခံရတက်ကြွခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အများကြီးကိုအခြားသူများကတလျှောက်သွားဘို့လမ်းကိုရစေချင်တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တဦးတည်းဦးတည်ချက်အတွက်အတူတကွရွှေ့လျှင်, လမ်းကြောင်းကိုအစာရှောင်ကျနော်တို့နေဆဲဂီတအောင်မြင်ပြီမဟုတ်သည့်အောင်မြင်မှုမှလမ်းကြောင်းသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။
လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲ၌။ တတ်နိုင်သမျှအများအပြားနှလုံးသားများသို့ရောက်ရှိ။ မေးခွန်းကတော့သက်သက်သာပထဝီရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ဟုမေးလျှင်ကောင်းပြီ, ငါတို့သည်နေဆဲဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုမှဖူးကြပြီမဟုတ်။ အမေရိက, တရုတ်, ကနေဒါ။ အောင်နိုင်မှနေဆဲသစ်ကိုနယ်မြေများ။ ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်စမ်းသပ်မှုကဒီမှာဘူလ်ဂေးရီးယား၌တည်ရှိ၏။ ကျနော်တို့သမိုင်းမှဦးတည်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့တာပေါ့ဘယ်မှာတဲ့သူသိတယ်။
ပြစ်မှုအများစုကခံစားရတဲ့သူတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါဟာမသေချာမှုနှင့်အမြစ်နှင့်မြေဆီလွှာ၏မရှိခြင်းဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှရှောင်ကြဉ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုကျိုးပဲ့-နှလုံးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးပေးရန်ပျက်ကွက်သောအခါကအများအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကပိုလုပျနိုငျကွောငျးသိရပေမယ့်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပေးထားကြပြီမဟုတ်အခါ။ ထိုအခါသင်တို့ပတ်လည်လူတိုင်းကခံစား, အချို့စိတ်ပျက်ရှိသေး၏။ ဤသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မှရှောင်ကြဉ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ သို့သော်ထိုသို့အစဉ်အမြဲ 100% လွယ်ကူသောမဟုတ်ပါဘူး။ တခါတလေပင်ပန်းလည်းရှိသေး၏။
ကိုယျ့ကိုယျကိုကနေအရာရာကိုပေးဖို့နဲ့တဦးတည်းဦးတည်ချက်အတွက်အတူတကွရွှေ့ဖို့အမြဲအကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "အောင်မြင်မှု" သည်အလွန်ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာဖြင့်သမုတ်သော။ လူတိုင်းကအကြောင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတဲ့စိတ်ကူးရှိပါတယ်။
အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီကိုပြန်လှည့်နှင့်နောက်ဆုံးရလဒ်နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာအောင်မြင်ထားပြီးဖြစ်သောတလျှောက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူမသာပျော်ရွှင်ဖြစ်ပါသည်, လျှင်, အရာအားလုံး OK ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုဒီဂရီမှဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သနည်း ကျနော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်! ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော်တို့ကို Jeremy သနည်း ဂီတနှင့်မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဒီကျွန်ုပ်တို့အတူတကွကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကစားနေသည့်အခါထင်ချင်ရာဖြစ်တယ်။
ဂျယ်ရမီ? Youtube ကိုမှာ
ဂျယ်ရမီ? Facebook အမှာ
ဂျယ်ရမီတို့ကသီချင်းတွေကိုနှင့်အယ်လ်ဘမ်များကို Preview and download?
ဂျယ်ရမီ? SSMag တီဗီမှာ
ဒိုင်ယာနာ Alexandrova - ကခုန်အကြီးမြတ်ဆုံးစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါသမုဒ္ဒရာထဲတစ်ဦးကဘဝ - ယခုဘဝ Nomadik
ဓာတ်ပုံပြက္ခဒိန် - ရဲ့အလှတရားမြှင့်တင်ရန်ပါစေ
Annie Trippah - ဖင်လန်အတွက်ဖန်တီးမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
တီးဝိုင်း, Indie ရော့ခ်, ဂီတ | | rating:5/ 30
အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag Facebook ပေါ်မှာ